China Lycra Texture Weft Yakarukwa 8% Spandex 92% Polyamide Shiny RPET Jacquard Yakaunyana Seersucker Stretch Swimsuit Fabric Mugadziri uye Mutengesi | Wenchang
Lycra Texture Weft Yakarukwa 8% Spandex 92% Polyamide Shiny RPET Jacquard Yakaunyana Seersucker Stretch Swimsuit Jira
Item Kwete: KW-1903
Zvinyorwa: 8% Spandex 92% Polyamide
Hunhu: Ganda-Rakanakira / Anti-Kuunyana / Elasticity /
Inoshandiswa Kune: Swimsuit
CHIKAMU CHEMAHARA Swimsuit Jira
Chinhu icho kwete KW-2182
Mashoko 92% zvinhu zvenaironi 8% Spandex
Feature Kurumidza kuoma / Windproof / isapinda / Anti-UV
Seersucker ipuroteni yedonje ine furo uye crepe. Kune akawanda marudzi eiyo kuchenesa, yakajeka ruvara, kudhinda uye yarn-yakadhayiwa-mavara mavara. Inofema uye yakasununguka kupfeka. Hazvidi kuayinwa mushure mekuwacha. Iyo inokodzera zvipfeko zvevana, mabhurauzi, masiketi, mapijama, nezvimwe. Seersucker ine mukobvu wakakora kuverenga inogona kushandiswa sekuwaridza machira, maketeni, nezvimwe. Kune nzira dzakawanda dzekugadzirisa. Kupupira furo ndiko kushandisa kweshinda dzinokura uye kudzikira padzinoratidzwa kune yakanyanya alkali. Seersucker yakawanikwa nekudhinda alkali yakananga pane machira ekotoni inonzi alkali seersucker, inozivikanwawo sedzetsika seersucker; seersucker yakadhindwa zvishoma neanti-dhayi resin pane machira ekotoni, uye seersucker inogadzirwa neye yakazara padanda. Izwi rinoshandiswa pakudhinda nekudyara indasitiri ndeye resin seersucker
Matanda maviri eakarukwa, pasi warp uye kubhowa warp, anoshandiswa mukuruka. Shinda inopupuma ine huwandu hwakakora hwekuverenga uye iyo warp yekuregedza kumhanya ingangoita 30% nekukurumidza kupfuura iyo yepasi yakarukwa. Naizvozvo, iyo jira muviri unogadzira concave uye convex matema kana uchiruka kuita grey jira. Mushure mekupedza kusununguka, inova seersucker yakarukwa. Seersucker inogadzirwa nenzira iyi inowanzo gadzirwa nemavara-akapendwa zvigadzirwa zvemavara, zvinosanganisira zvese-donje, yakanatswa fiber kana kemikari fiber inosanganiswa.
Semuenzaniso, iyo yakakoswa yewell kana weft yarn pakati pepolyester nekotoni yakarukwa uye inorapwa nesodium hydroxide solution. Sezvo donje fiber rinodzikira kupfuura polyester fiber, iro jira muviri richaumba mabhuru anoputika; mumwe muenzaniso iko kushandiswa kwepamusoro shrinkage polyester uye yakajairika polyester mune yakarukwa. Iyo machira yakarukwa kuita spacer mitsetse yakarongedzwa mune weft nzira kana mune weft nzira. Mushure mekurapa kwekupisa, iro jira muviri unogadzira concave-convex matema nekuda kweakasiyana ekupisa shrinkage mwero wemaviri tambo.
Iyo mbishi yezvinhu seersucker inogadzirwa neyakachena donje kana polyester / donje, uye kuwanda kweiyo bubble warp kwakakwirira kupfuura iyo yevhu yakarukwa, kana iyo bubble warp inogadzirwa netambo uye iyo yepasi warp inogadzirwa neshinda imwechete. Kana uchiruka, iyo yekuregedza vhoriyamu yebubble warp yakakura kudarika iyo yepasi yakarukwa, uyezve iyo sero warp yakavezwa uye kugadziriswa zvakasununguka kuti igadzire akanaka, asina kuenzana matema. Shandisa chirevo chekuti donje fiber inosangana neyakagadziriswa lye kuti iwedzere hupamhi uye kupfupisa kureba.
Seersucker machira ekotoni ane kutaridzika kwakasarudzika uye maitiro echitaera, ayo akagadzirwa nemutete muslin. Iyo jira repamusoro rinopa mabhuru madiki neunifomu uye kuenzana kusaenzana, uko kusiri padyo nemuviri kana uchinge wakapfeka, uye kune kutonhora kunzwa. Iyo inokodzera kune ese marudzi ehembe dzevakadzi zhizha. Iko kunakirwa kwembatya dzakagadzirwa nesersucker ndeyekuti hadzidi kuainwa mushure mekuwachwa, asi chakanakira ndechekuti matobvu anozoita akapfava mushure mekudzokorora kukwesha. Kunyanya kana uchigeza, hazvikurudzirwe kushandisa mvura inopisa kunyorova, kana kukwesha uye kumonyanisa zvine simba, kuti zvirege kukanganisa kubhowa nekukurumidza.
Pashure: Soft Yakadzokororwa Polyester RPET Pet Mesh Milky Jersey Mucheka Wakagadzirwa Kubva Wakagadziriswazve Mabhodhoro ePurasitiki eT-sheti Sportswear
Zvadaro: RPET Sweat 87% polyamide 13% spandex Lycra Cotton Kunzwa Jacquard Tsika 4 Nzira Yakatambanudzwa Yakadhindwa Yakagadziriswazve Kudzora Kwembatya
Jacquard swimsuit machira, Seersucker swimwear jira, polyamide machira